COVID-19: Jawaab-celinta ICRC ee coronavirus-ka Afrika | ICRC da Soomaaliya
COVID-19: Jawaab-celinta ICRC ee coronavirus-ka Afrika
01/04/2020 , Maqaallo
Cudurka saf-marka ah ee ‘COVID-19’ sidoo kale loo yaqaan coronavirus ayaa ka xoog badiyay nidaamyada daryeelka caafimaad horumarsan ee adduunka oo dhan. Ilaa iyo hadda Afrika si daran ugama faafin, laakiin haddii aan tallaabo dhakhso ah la qaadin si loo xakameeyo fayruska wuxuu yeelan karaa saameyn baa’an ah, gaar ahaan meelaha ay saameyeen iska-horimaadyada iyo rabshadaha.
Dowladaha si dhaqso ah tallabo ayeey qaadeen oo ah mamnuucidda safarada, is-karantiilka iyo tallaabooyin kale oo ka hortag ah. Kuwani waa tallaabooyin muhiim ah oo la qaaday si loo xakameeyo faafinta COVID-19, laakiin haddii uu ka dillaaco degaano dad fara badan ku nool, oo aan laga heli karin biyo nadiif ah ama leh nidaamyo daryeel caafimaad oo daciif ah, waxaa laga yaabaa inay la kulmaan dhibaato bani’aadamnimo cusub ah.
Tobannaanka milyan oo dad ah oo ku sugan Afrika kuwaas oo ku nool xeryo barakacayaal ah oo dadku ku badan yihiin iyo degaanno aan rasmiga ahayn,haddana badanaa laga heli karin daryeel caafimaad ku habboon, biyo nadiif ah iyo fayadhowr, waxay si gaar ah nugul yihiin ugu faafinta cudurka COVID-19. Suurtogal uma aha in dadku ay u ixtiraamaan kala fogaansho. Isla markaasna, haddii fayrusku uu ku faafo meelaha iska-horimaadyada tooska ah ka dhacaan, waxaa sii adkaanaysaa in la raad-raaco kiisaska cudurka qaba.
‘Xabsiyada Afrika waa kuwo aad u buux dhaafa. Kala fogaanshada dadka waa wax aan macquul aheyn. Hal kiis COVID-19 ah oo xabsi ka dhex dillaaca ayaa waxaa laga yaabaa in uu noqdo masiibo. – ayaa yiri Madaxda Qaybta Dhowrsta ICRC ee Afrika, Aribani Ibachi Witanene.
Cabsida hadda jirta waa haddii aan tallaabo deg deg ah laga qaadin xakameynta faafinta COVID-19, fayrusku wuxuu ka dillaaci karaa qaar ka mid ah bulshada ugu nugulka ah ee adduunka, wuxuuna keeni karaa cawaaqibo daran. Shaqada ICRC, oo ah u adeegsiga dadka ay saameeyeen iska-horimaadyada hubaysan iyo rabshadaha ka jira qaaradda Afrika, lama joojin doono cudurka COVID-19 awgiis. In ka badan 40% howlaha ICRC waxaa lagu qabtaa Afrika. Qaar badan oo ka mid ah barnaamijyadaan ayaa ah kuwo naf lagu badbaadinayo, waxaana laga hirgeliyaa meelaha hay’ado kale gaari karin.
Isku-duwaha Caafimaadka ee ICRC-da Soomaaliya oo sharaxayaa saameynta COVID-19 dalka gudihiis iyo qaar ka mid ah howlaha ICRC iyo Ururka Bisha Cas ay qabanayaan si looga hortago ku faafida fayruska bulshooyinka dhexdooda.
Ka sii akhriso mareegta icrc.org.